Mechanical akara warara Factory, suppliers - China Mechanical akara warara Manufacturers
Mechanical akara warara (2)
A na-ejikarị eriri roba akara ígwè maka kabinet na ígwè ọrụ. Isi ihe eji emeputa ihe bu EPDM, PVC, roba nitrile, na silicone roba. Tumadi-arụ ọrụ nke gwara, ụda mkpuchi, waterproof, dustproof, ahụhụ na-egosi na akara.
Ihe nkedo akara bụ ngwaahịa nke na-emechi ụdị ihe na-eme ka ọ ghara ịdị mfe imeghe. Ọ na-ekere òkè na ịmịnye mmiri, mmiri na-ekpuchi mmiri, mkpuchi mkpuchi, ikpo ọkụ ọkụ, mgbochi uzuzu, ma nweekwa nnukwu mgbanwe, ndụ ogologo ndụ, nkwụsị aning na ọnụahịa asọmpi. Anyị akara eriri nwere ike izute gị iji na imewe arịrịọ.
Anyị ụlọ ọrụ ịmụta elu mmepụta akara, iji akụrụngwa si USA, Netherland, Korea na Germany, nwere pụrụ iche Nwa nke rubbers, ịhụ na-enye ezi mma, ala price ngwaahịa. Anyị dị njikere ịrụ ọrụ na ndị enyi si n'akụkụ ụwa niile iji mepụta ọdịnihu dị mma ọnụ.
Mechanical seals bu ihe mejuputara nke bu EPDM ma obu ihe adighi nma nke PVC na EPDM sponge bulb na ihe nkpuchi igwe di iche na ire nke oma iji nye aka kachasi nma, nke eji otutu ihe eji eme ihe, ugbo ala, ugbo ala na ihe ndi ozo. eji ya na-enye akara na ebe ntinye ma ọ bụ ụzọ ọpụpụ nke ogwe ntụgharị. Mgbe ị na-arụ ọrụ nke ọma, ihe nkiri mmiri dị ezigbo mkpa dị n'agbata ihu na-anọ ọdụ, nke ọrụ ya dị mkpa iji mechie ihu akara ahụ wee gbochie oke ịkwa akwa. Meals Mechanical nwere ezigbo akụrụngwa akụrụngwa, ọ nwere ọtụtụ nha iji dabara nke ọma na nke ọma mechie akụrụngwa .mechanical nwere ike belata mkpọtụ na ujo ma chekwaa ihu igwe site na mmebi na ọnọdụ dịgasị iche iche .M nwere ike ịzụlite ngwaahịa ọhụrụ nke na-emeju ndị ahịa n'oge kachasị dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.